Ajaanibta u dhalatay dalka Sweden oo laga daad gureynayo Soomaaliya. | XAL DOON
Home NEWS Ajaanibta u dhalatay dalka Sweden oo laga daad gureynayo Soomaaliya.
Ajaanibta u dhalatay dalka Sweden oo laga daad gureynayo Soomaaliya.
Warar ku dhow dhow Safaaradda Sweden ku leedahay magaalladda Muqdisho ayaa sheegay inay socdaan qabanqaabada sidii Diplomaasiyiinta iyo Muwaadiniintooda looga saari lahaa Somalia, sababo la xiriira COVID 19.
Ilo-wareedyo ayaa sheegayo in Diyaarad Khaas ah ay maanta Muqdisho ka qaadi doonto Muwaadiniinta haysta dhalashada dalka Sweden, kuwaasi oo dib loogu celin doono dalkooda hooyo.
Safaaradda Sweden weli si rasmi ahaan ugama aysan hadlin qorshaha lagu daad-gureyn doono Muwaadiniintooda ku sugan Somalia, inkastoo ay dad haysta dhalashada dalkaasi sheegeen inay socdaan qorshe ay dib ugu laaban doonaan Sweden.
Tiro dad Soomaali haysta dhalashada Swedishka ayaa ku xayiran Muqdisho, kuwaasi oo la kulmay Xayiraadii lagu soo rogay Duullimaadyadii Caalamiga ee imaan jirey Somalia, sababo la xiriira COVID 19.
Maalmo ka hor, Safaaradda Maraykanka ku leeyihiin Somalia waxay qabanqaabisay Duullimaad Khaas ah oo lagu daad-gureeyey Diplomaasiyiinta, Muwaadiniintooda iyo dadka kale ee haysta Dhaslashada qaar ka mid ah dalalka Reer Galbeedka.
Safaaradda Maraykanka waxay daad-gureyntaasi ku sheegtay inay la xiriirto cabsi laga qabo Faafista COVID 19 ee gudaha Somalia.
Sidoo kale, Safaaradda Turkiga waxay bishii hore qabanqanqaabisay Duullimaad Khaas ee Turkish Airlines, oo lagu daad-gureeyey Muwaadiniintooda ku sugnaa gudaha Somalia, kadib, markii uu Madaxweyne Erdogan bixiyey Amar Guud oo ku aadan in dhamaan Muwaadiniinta Turkishka ee ku nool dalalka Caalamka dib loogu soo celiyo dalkooda Hooyo, sababo la xiriira Khatarta Faafista Caabuqa COVID 19.